आकार लिन नसकेको मधेसी राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन १, २०७४ प्रा. कृष्ण खनाल
काठमाडौँ — मधेसी राजनीतिको केन्द्र मानिने प्रदेश–२ मा स्थानीय चुनावका लागि भोलि असोज २ गते मतदान हुँदै छ । मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारलगायत काम सकेर उम्मेदवार/पार्टीहरू यतिखेर मौन अवधि भए पनि आआफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न अन्तिम तयारी गरिराखेका होलान् ।
चुनावलाई गहिरोसँग नियाल्नेहरूको विश्लेषण छ, मौन भनिएको यही अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने अनेक अवाञ्छित चलखेल हुने गर्छ। यो चुनाव पनि त्यसबाट अपवाद हुने देखिन्न। त्यसमाथि चुनावका बेला हुने व्यापक अनियमितताका लागि यो क्षेत्र अरू चर्चित हुने गरेको छ। चुनावपछि कसले वा कुन पार्टीले जित्यो, हार्‍यो? के कस्तो प्रतिस्पर्धा भयो? निर्णायक मतलाई केके कुराले बढी प्रभाव पार्‍यो, आदि चर्चा हुने नै छन्। तर यो लेखमा मैले अलि फरक विषय उठान गर्न खोजेको छु– ‘मधेसी राजनीति’। सुरुमै के हो मधेसी राजनीति, प्रस्ट पार्न जरुरी छ। यो भनेको मधेसका नाममा राजनीति गर्दै आएका दल र नेताहरूको राजनीतिक व्यवहारको विषय हो।
मधेसी राजनीतिको मुद्दा उही छ, पात्रहरू उनै छन्। यसले अझै आकार लिन सकेको छैन। के यो चुनावपछि यसले तुलनात्मक रूपमा केही स्थिर आकार लिन सक्ला? चुनावी राजनीतिमा हारजित निरन्तर चलिरहने कुरा हो। कांग्रेस, एमालेका लागि को पहिलो भयो भन्ने ठूलो कुरा होला। माओवादीका लागि मधेसमा उल्लेख्य जित भयो भनेर सन्तोष होला। राजपा नेपालका लागि मधेसको किल्ला कायम राख्न सक्यौं भनेर फुर्ती होला। तर मेरा लागि यसले नेपालको राजनीति र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी चलायमान राख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसका लागि राजनीतिक दलहरूको भरपर्दो आकार अर्थात् स्थिरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
मधेस आन्दोलन भएको एक दशक नाघिसकेको छ। संघीय आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्नका लागि मधेस आन्दोलन निर्णायक साबित भयो। पहिलोपटक तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग र दोस्रोपटक फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत मधेसकेन्द्री दलहरूसँगको सम्झौतापछि संघीयतामा जाने राज्यको निर्णयसँगै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो चुनावबाट मधेसी दलहरू प्रभावकारी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित पनि भए। यसले नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्त क्षेत्रीय आयाम थपियो। क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा मधेसकेन्द्री दलहरूको पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी उपस्थिति थियो। तर सत्ताको खेलमा वर्ष दिन पनि नपुग्दै उनीहरू विभाजनको दलदलमा फस्न थाले। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा विभाजनको तीव्र शृंखलामा उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थितिमा उल्लेख्य गिरावट पनि आयो। तथापि मधेसकेन्द्री दलहरूको कुल मतमा कमी भएन, बरु थोरै वृद्धि नै भएको थियो। हो, संसदीय राजनीतिको खेल र कारोबारमा संख्याको महत्त्व निकै हुन्छ। तर राजनीतिक दलको लोकप्रिय जग अर्थात् जनाधारमा पुग्न र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्न उसले पाएको कुल मत महत्त्वपूर्ण आधार हो। दोस्रो संविधानसभामा संख्याका हिसाबले मधेसी दलको उपस्थिति कम भए पनि मधेसमा उनीहरूको समर्थन कम भएको थिएन। चुनावले दिने सिट संख्याको विवरण त प्राविधिक परिणाम हो, जनमत मापनको आधार कुल मत नै हो।
चुनावमा हारजितको प्राविधिक पक्ष र समग्र मतको राजनीतिक पक्षलाई विवेकपूर्ण रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्दा नब्बे प्रतिशतको बहुमतले संविधान पारित गर्दा पनि त्यसको मधेसमा स्वीकार्यताको संकट रह्यो। संविधानको जयजयकार गर्दैमा त्यसले गति लिन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। पञ्चायती संविधानको ३० वर्षसम्म जयजयकार नै त थियो। यो चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको सहभागिताले महत्त्व थपेको छ। आगामी मंसिरमा हुने संघीय संसद्को तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि संवैधानिक प्रणालीले थप सहभागिता एवं स्वीकार्यता पाउने सम्भावना बढेको छ। संवैधानिक प्रणाली विकासका लागि यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। साथै यो चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लिन्छ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ तर त्यो अझै सुनिश्चत भने देखिन्न।
गएको साता धनुषादेखि झापासम्मका तराई/मधेसका केही भागमा भ्रमण गर्ने अवसर जुट्यो। धनुषा र सिरहाका केही गाउँ/नगरपालिकामा चुनावी सरगमलाई पनि अलि नजिकबाट हेर्न पाएँ। प्रदेश–२ पूरै चुनावमय भएको छ। काठमाडौंको मिडियामा प्राय: नआउने यो चुनावका अरू दुई पक्ष पनि रहेछन्— बहिष्कार र मतपत्रको कोठाबाहिर छाप। केही युवा प्रदेशको सीमांकनलगायत संविधानसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा संशोधन नभई चुनावमा जानु ठीक छैन भनी बहिष्कारका पक्षमा रहेछन्। उनीहरूले उम्मेदवार मनोनयनदेखि नै विरोध र बहिष्कारका केही कार्यक्रम पनि चलाएका छन्। तर यसको प्रभाव अत्यन्तै नगण्य देखिन्छ। यस्तै, मधेसमा पृथक्ताको नारा दिँदै चर्चामा आएका सीके राउतले नमुना मतपत्रसहित मधेसी जनताको एकता, संविधानको अस्वीकार्यतलगायत कुरामा आफ्नो मत जाहेर गर्न मतपत्रको कोठाबाहिर छाप लगाउन अपिल गर्दै एउटा पर्चा छरेका रहेछन्। त्यसमा राष्ट्रिय विखण्डन जनाउने पृथक्तावादको प्रत्यक्ष अपिल छैन। यसलाई मधेसमा जनमतसंग्रहको सन्देश वा रूप दिन आग्रह गरिएको छ। उद्देश्य, आसय जे भए पनि प्रकारान्तरले यो पनि संविधानको प्रयोग र उपयोगसँगै जोडिन्छ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा प्रदेश–२ समग्रमा चुनावको मुडमा छ। तसर्थ स्थानीय भने पनि यो चुनाव धेरै अर्थमा व्यापक राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्त्वको छ।
अब मधेसी राजनीतिको आयाम र आकारका बारेमा थोरै चर्चा गरौं। २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै मधेसले स्वायत्ततासहितको राजनीतिक सहभागिता खोजेको पाइन्छ। तथापि त्यसले मधेसको राजनीतिलाई खासै प्रभावित गरेको पाइन्न। २०४१/४२ सालतिर हर्क गुरुङ नेतृत्वको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मधेसको राजनीति तात्न थाल्यो। राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा गजेन्द्रनारायण सिंह सहभागी भए। सप्तरीबाट विजयी पनि भए। त्यसबेला पनि मैले सप्तरीको चुनावी माहोललाई स्थलगत अध्ययन गर्न पाएको थिएँ। सद्भावना परिषद्का रूपमा उनले मधेसी पहिचानको राजनीति प्रारम्भ गरेका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यही परिषद् सद्भावना पार्टीका रूपमा पुनर्गठित भयो। २०४८ सालको चुनावमा ५ सिटसहित पहिलो क्षेत्रीय दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्न सफल पनि भयो। २०५६ सालमा पुग्दा अर्थात् सद्भावना राजनीतिको एक दशक नपुग्दै यसका संस्थापक गजेन्द्रनारायण स्वयंले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे र अस्तित्वका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हालत बन्यो।
२०४६ सालयताको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसको क्षेत्रीय अर्थात् मधेसी राजनीतिले तीन दशक पार गर्न लागेको अवस्था छ। केही नाराबाजी र चर्का कुराबाहेक मधेस राजनीतिका मुख्य मुद्दा उही छन्। २०६३ सालमा आइपुग्दा केही पात्र थपिए, नयाँ दलहरू आए र समर्थनको आयाम पनि बढ्यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लियो भन्ने लागेको थियो। तर त्यो टिकेन। किन यस्तो छ र हुन्छ मधेसी राजनीति? यसका चारवटा कारण भेटिन्छन्।
पहिलो, क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतक दलको अभ्यास राष्ट्रियता र लोकतन्त्रविपरीतका कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको बृहत् परिधिमा अभ्यास हुँदै आएको छ भन्ने बुझ्न बुझाउन नसक्नु। यसका निम्ति मधेसी दल मात्र जिम्मेवार छैनन्, राष्ट्रिय भनिएका कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा क्षेत्रीय दलमाथि यस्तो आक्षेप आउनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर आधारभूत रूपमा बुझाइ नै फरक भयो भने समस्या हुन्छ।
दोस्रो, मधेसी दल र नेतामा पनि क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय पार्टी र नेता बन्ने आकांक्षा अत्यधिक छ। अहिले त मधेसका प्रमुख दल राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम सबैले आफ्ना नामबाट ‘मधेसी’ शब्द हटाइसके। यस्तै चाहना हो भने मधेसका नाममा क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न। जनतालाई धोका मात्र हुन्छ।
तेस्रो, मधेसको राजनीतिक संस्कृति (पोलिटिकल कल्चर) पनि अलि फरक छ। मधेसको राजनीतिक संस्कृतिमा पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्री व्यवहार अत्यधिक छ। सबै पहिलो नेता बन्ने होड छ। यो कुरा मधेसी दलमा मात्र होइन, राष्ट्रिय भनिएका दलमा पनि लागू हुन्छ। तर तत्कालै दलबदलु वा नयाँ पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ र यो कुरा त्यहाँ स्थापित राजनीतिक मान्यताजस्तै बनेको छ। मधेसकेन्द्री दलहरूमा चाहे नेता हुन् वा कार्यकर्तामा फ्रेस स्टार्टर पाउन अत्यन्त कठिन छ। सबैको स्रोत कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा पञ्चमै पुग्छ। पहिलो पुस्ताका नेता चाहे गजेन्द्रनारायण हुन् वा रामचन्द्र तिवारी, पहिले कांग्रेसमै थिए। पछिल्लो चरणमा मधेस हाँक्न पुगेका महन्थ ठाकुर हुन् वा जयप्रकाश वा बृखेशचन्द्रलाल वा विजय गच्छदार धेरैको लामो कांग्रेसी पृष्ठभूमि छ। उपेन्द्र यादव, हृदयेशलगायत कतिपयको बामपन्थी पृष्ठभूमि छ। त्यस्तै, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, शरतसिंह भण्डारीलगायत कतिपयको पञ्चायत राजनीतिको पृष्ठभूमि छ। पञ्चायतको पष्ठभूमिबाट कांग्रेस, एमाले पनि मुक्त छैनन्। फरक के हो भने यिनीहरूमा पार्टीको मूलधारले नवप्रवेशीलाई समाहित गर्छ। तर मधेसी दलमा यी अलग–अलग लबी र गुटका रूपमा कायमै छन्। एकीकृत धार बन्न सकिराखेको छैन।
चौथो, मधेसको भूराजनीति अर्थात् भारतीय भूमिका पनि त्यहाँ स्वस्थ राजनीतिक विकासका लागि अनुकूल बन्न सकेको छैन। झट्ट हेर्दा मधेसको राजनीतिक हित र भारतीय भूमिका निकै पारस्परिक छ भन्ने लाग्छ। प्रस्तुति पनि त्यस्तै हुने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण मधेसको भारतसँग व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत धेरै किसिमको सम्बन्ध छ। तर यसको अर्थ यो होइन, भारत सरकारको नीति र प्राथमिकतासँग मधेसको हित सदैव जोडिएको हुन्छ। नेपालको राजनीतिलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक हित र प्राथमिकता अनुकूल राख्न र उपयोग गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबले अस्वाभाविक र अनौठो होइन। पछिल्लो दशकमा यसका लागि मधेस कार्ड सबैभन्दा धारिलो हतियार बनेको छ। संविधान निर्माणको राजनीतिदेखि स्थानीय चुनावमा मधेसी दलहरूको सहभागितासम्मको अवस्थाले यसलाई छर्लंग पारेको छ। यो कुरा मधेसी राजनीति गर्ने खास गरी नेता र उनीहरूलाई निकटबाट परामर्श दिने बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छैनन् भन्न त सकिन्न तर त्यसको लक्ष्मणरेखा छुट्याउन नसकेको चाहिँ छताछुल्ल छ।
स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा मधेसको माथि उल्लिखित राजनीतिक आयाम अझ बढी मुखरित भएको छ। भूराजनीतिको सीमा छँदै छ। त्यसको आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने चुनौती र क्षमताको प्रश्न मधेसका हकमा मात्र लागू हुन्न, समग्र नेपाली राजनीतिको विषय हो यो। तर पहिलेदेखि नै रहँदै आएको र अहिले स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिक संस्कृति अझ प्रखर भएर आएको छ। स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि भएको मनोनयनका क्रममा रातारात दल बदलेर उम्मेदवार बन्ने होड चल्यो। वीरगन्ज महानगरमा विमल श्रीवास्तव, राजविराजमा अनिस अन्सारी दलबदलु चर्चाको शिखरमा रहे। यस्ता कतिपय व्यक्ति सद्भावना, राप्रपा, स्वतन्त्र, तमलोपा, माओवादी, के भएनन्? यसका पछाडि पैसाको छेलोखेलो र जिम्मेवार नेताहरूले त्यसैलाई दिएको महत्त्व पनि कसैबाट छिपेको छैन। पैसाको लेनदेन र उम्मेदवारी चुनाव खर्च धान्नेमा मात्र सीमित छैन। कतिले यसलाई आफ्नै आर्थिक सुदृढीकरण र निजी सुखसयलका रूपमा पनि उपयोग गरेको पाइन्छ।
मधेसको राजनीति अस्थिर छ। यो अस्थिरताका लागि राष्ट्रिय दलहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन्। मधेसी राजनीतिले आकार नलिँदा यी दललाई आफ्नो पक्षमा चुनावी उपयोग सजिलो पनि छ। देशका लागि भने यो घाटादायी नै छ। मधेस अस्थिर राखेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो अल्पज्ञान र मूर्खताभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। यो चुनावलगायत आगामी मंसिरमा तय गरिएको चुनावमा मधेस र मधेसीको राजनीतिले स्वस्थ र स्पष्ट आकार लिन सक्नुपर्छ। यसैमा नेपालको अर्थपूर्ण राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक प्रणालीको विकास निर्भर गर्छ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१६